ရင်ဖွင့်ချင်လို့ပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
My Dear Diary » ရင်ဖွင့်ချင်လို့ပါ	12
Posted by အောင် မိုးသူ on Jul 15, 2016 in My Dear Diary | 12 comments
ဖေ့ဘုတ်မှာတော့ အလုပ်အကြောင်းတွေကို မတင်တတ်ပါဘူး။ ပျော်ပျော်ပဲသုံးချင်လို့ပါ။ ရွာထဲမှာတော့ ရင်လာဖွင့်တာပါ။
အလုပ်မှာပေါ့ ရုပ်ရှင်ပရိုဂရမ်လေး မိန်းစပွန်ဆာ နှစ်ခုတောင်ရတော့ အောင်မြင်တယ်ပေါ့
အဲ့လိုနဲ့ ပရိုဂရမ်တွေ ထပ်လိုတယ် ဟင်းချက်ပရိုဂရမ် လုပ်ပါ လုပ်ပါနဲ့ လူကြီးတစ်ယောက်က ပြောလာပါရော။
လူကြီးက မိန်းမပါ။ သူ့အထက်မှာတော့ ဖော်ရိန်နာတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ သူက ကျတော့်ကို တတွတ်တွတ်ပြောပါတယ်။
နင် ဟင်းချက်ပရိုဂရမ်ကို အကောင်အထည်မြန်မြန်ဖော် တကယ်လို့ ဟင်းချက်ပရိုဂရမ်သာ ရုပ်ရှင်ပရိုဂရမ်လို စပွန်ဆာရရင်
နင့်ကို အိုင်ဖုန်းဝယ်ပေးမယ် ခဏခဏပြောတယ်။ တစ်ရုံးလုံးလည်းသိတယ်။ ခု ဟင်းချက်ပရိုဂရမ်ကို အကောင်အထည်ဖော်
လိုက်တယ်လေ။ စပွန်ဆာချည်းပဲ သုံးခုတောင်ရနေပြီ Air ပေါ်တက်မှာက သြဂုတ်မှပါ။ အခုထက်ထိတော့ ဖုန်းနဲ့ ပတ်သက်တာ
တစ်လုံးတောင်မကြားရသေးဘူး။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သူကတိပေးထား ပြောထားတော့ မျှော်မိတယ်။ သူ့ကို ဖုန်းမ၀ယ်ပေးဘူး
လား မေးဖို့ကျလည်း ရှက်တယ်။ တွေးကြည့်ပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်မိလို့ ရွာထဲ လာရင်ဖွင့်တာပါ။
လုံမလေးမွန်မွန် says: ကိုယ့်အောင်မြင်မှုက ဖုန်းထက်အဆများစွာ သာတာပဲ . . . စိတ်မကောင်းဖြစ်နေမယ့်အစား ထပ်အောင်မြင်ဖို့ စိတ်နှစ်ထားလိုက်ပါ
အောင် မိုးသူ says: နှစ်ထားပါတယ် မွန်မွန်ရေ…..။
nicolus agral says: ရစရာရှိတာတော့ ရအောင်သာတောင်း
ဂျစ်စူ says: လက်တို့တောင်းရင် ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်
စိုက်ကြည့်ရင် အလိုက်သိလို့ ပြောဘလိုက်
မြစပဲရိုး says: ပါးစပ်က နေ အလွယ်ပြောတတ် ပြီး မေ့သွားတတ်တဲ့ သူ တွေ လောကထဲ အများကြီး ရှိပါရောလား မောင်အောင်။
သက်သေစာ လိုမျိုး မရှိလို့ ကတော့ တရားဝင်တောင်းဖို့ ခက်သား။
ဒါပေမဲ့ ” မောင်နကလအဂ” ပြောသလို ရစရာ ကို စကားစပြီး တောင်းပေါ့။
အီးမေးလို ပို့ ပြီး အစ်မ ကျွန်တော့ ပရိုဂရမ် ကို feedback ပေးပါ ပြော။
ဟိုက အကောင်း feedback ပြန်ပေး ရင် “ကျေးဇူးပါ လို့ ပြောပြီး အစ်မ ကျွန်တော့ ကို ဟင်းချက်ပရိုဂရမ် အလုပ်ဖြစ်ရင် အိုင်ဖုန်းဝယ်ပေးမယ် ပြောထားတာ တကယ်ပေးမှာလား လို့ မေးပေါ့။”
ဟိုက သဘောရိုး မေ့နေတာဆို ပေးလိမ့်မယ်။
မသိခြင် ထောင် ဆက်ထောင် နေတာ ဆို ရွှီးမမ တွေထဲ က တစ်ယောက် လို့ သာ မှတ်လိုက်။
သို့ပေမဲ့ အဲဒီအပေါ်မှာ ဘာမှ မခံစားဘဲ ၊ သူ့ ကိုလဲ စိတ်ထဲ အဖု အထစ် မထားဘဲ ကိုယ့်အလုပ် ကိုသာ ကြိုးစားပြီး ပိုအောင်မြင်အောင် လုပ်ပါ။
စေတနာ ဆိုတာ အမြဲ နောက် က ကောင်းကျိုး လိုက်လာတာ ကို ယုံပါ။
အနည်းဆုံးတော့ သူ့ တိုက်တွန်းမှု နဲ့ မင်း မှာ အဆင့် တစ်ဆင့် မြင့်သွားတာ ကို မြင်နိုင်ပါတယ် မဟုတ်လား။
မင်းက တောင် မုန့်ပြန်ဝယ်ကျွေးသင့်သလားဘဲ။
ဒီတော့ မုန့်ဝယ်ကျွေးပြီး မောင်စိန်ပေါက် ပြောသလိုအတင်းသာစိုက်ကြည့် ပေတော့။
:-))) jk Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: တစ်နေ့က သေချာမေးလိုက်တယ်။ သူက ရူးချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ၀ယ်ပေးချင်တာပေါ့ ပိုက်ဆံမရှိလို့ ဘာလို့ပြောတယ်။ သူဘယ်လောက်ရတာ သိတယ်လေ။ ထပ်ပြိးတော့ မပြောချင်တော့ပါဘူး။ ခဏ ခဏပြောတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင်ရှက်ပါတယ်။ တစ်ရုံးလုံးအသိဆိုတော့ သူရှက်လိမ့်မယ်။ ဟန်းဆက်လည်း မလိုချင်တော့ဘူး။ တောင်းလည်း မတောင်းတော့ပါဘူး။
တောတွင်းပျော် says: ဟိုက ရွှီးမမသာဆို
ရုံးမှာ ကိုယ့် အချင်းချင်း
အိုင်ဖုန်းပရိုဂရမ်လို့သူမကြားတကြား ပြောင်းခေါ်ခိုင်းလိုက်။
ကိုယ်တိုင်တော့မပြောနဲ့ ပေါ့ ။
အောင် မိုးသူ says: ရုံးကလူတွေကတော့ ဖွပေးပါတယ်။ ပရိုဂျူဆာကြီး အိုင်ဖုန်းဘယ်မှာလဲ တို့ဘာတို့။ ကိုတောမပြောသလို သူမကြားတကြား အိုင်ဖုန်းပရိုဂရမ်လို့ ပြောရမယ်။ အောင်မြင်တာတော့မသိဘူး အခု စပွန်ဆာ သုံးခုရနေပြီ။
ဦးကြောင်ကြီး says: ebay မှာ တင်ထားတာ၊ နိကို သူက ဘယ်လိုအိုင်ဖုံးမျိုး ဝယ်ပေးမယ် ပြောမထားဘူး မှက်ထည်။ ဒါထက်ပေါသာရဲ ရှိတယ်။။ နီ ဝက်သားဘေသော့ … ငှိ ငှိ။။။
kai says: တောင်းရမှာ ကိုယ့်တာဝန်ပါ..။
Ma Ei says: .အဲ့လိုလဲ ရှိတာပဲလား…
.သတိပေးပြီးရင်တော့ ကျန်တာ သူ့အပိုင်းလေ….
.ပေးမယ်ပြောထားတာတော့ လိုချင်တာ အပြစ်မဟုတ်ပါဘူး ကိုယ်ကရှက်ရမှာမှ မဟုတ်တာ